बुधबार, जुलाई 26, 2006 सोमबार, अगस्ट 24, 2009 Douglas Karr
सेठले एक महान प्रश्न सोध्दछ जुन सामान्यतया सफ्टवेयर उत्पाद प्रबन्धकहरूका लागि झगडाको एक बिन्दु हो। के तपाई अन्तर्ज्ञान वा विश्लेषणको साथ जानुहुन्छ?
यसमा मेरो व्यक्तिगत विचार यो हो कि तपाईं यो दुबैको नाजुक संयोजन हुनुहुन्छ। जब म विश्लेषणको बारेमा सोच्छु, म डाटाको बारेमा सोच्छु। यो प्रतिस्पर्धा, प्रयोग, प्रतिक्रिया, स्रोत, र उत्पादकता को बारे मा डाटा हुन सक्छ। समस्या यो छ कि विश्लेषण भारी इतिहासमा निर्भर छ, नविनता र भविष्यमा होइन।
अन्य मिडिया उद्योगहरूमा काम गर्दा, मैले विश्लेषणलाई सबै निर्णयहरूको लागि महत्वपूर्ण सम्झें। यो विरलै अभिनव थियो। उद्योग नेताहरूले सजिलै उद्योग म्यागजिनहरू खरिद गर्थे र अरू कसैले सकारात्मक नरहेको केही नगरुन्जेल कुर्नुभयो â ?? त्यसो भए तिनीहरूले यसलाई अपनाउने प्रयास गरे। परिणाम दुर्लभ नवीनता संग एक मर्ने उद्योग हो।
अन्तर्ज्ञान, अर्कोतर्फ, एकदम छली हुन सक्छ। डाटाको पूर्ण विश्लेषण नगरी निर्णय लिनु र अन्य विशेषज्ञ वा ग्राहकहरूसँग तपाईंको विचार छलफल गर्नु ठूलो जोखिम हुन सक्छ। एक उपभोक्ताको दृष्टिकोण प्रदायकको भन्दा धेरै फरक छ। त्यसो भए - निर्माणमा एक प्रदायकको सफलता सहज निर्णयहरू उनीहरूको बजार पढ्नको क्षमतामा भारी तौल गर्छन्। सहमति पनि एक खतरनाक दृष्टिकोण हो। उद्धरण गर्न निराशा। Com:
â ?? सँगै काम गरिरहेका केही हानिरहित फ्लेक्सले विनाशको हिमपहिरो हटाउन सक्छ। can ???
मलाई लाग्छ कि यो सबै तपाईंको â ?? जोखिम स्वभावमा तल आयो ??? तपाईं वा तपाईंको संगठन तपाईंको अन्तर्ज्ञान र / वा तपाईंको विश्लेषणको साथ लिनको लागि कति इच्छुक हुनुहुन्छ। यदि तपाईं सँधै यो सुरक्षित खेलिरहनु भएको छ भने, कसैले तपाईंलाई किन्नुहोस् जो जोखिम लिन तयार छ। यदि तपाईं जहिले पनि जोखिम लिनुहुन्छ भने, विनाशकारी असफलताको सम्भावना आसन्न छ।
विकासशील उत्पादनहरूमा, म विश्वास गर्दछु विश्लेषणले अन्तर्ज्ञानलाई ध्यानमा लिन सक्दछ, जबसम्म यसको जोखिम र मूल्य सही रूपमा निर्धारण गरिन्छ। उच्च जोखिम, उच्च मूल्यको साथ विचार गर्न योग्य छ। उच्च जोखिम, कम मानले तपाईंको निधन गर्दछ। जोखिम प्रबन्धन गर्न उचित निर्णय लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ। जोखिम प्रबन्धन गर्ने जोखिम नलिन भ्रममा पार्नु हुँदैन, यद्यपि!
Digg प्रभाव: राम्रो सामग्री + सोशल नेटवर्किंग = BIG HITS